प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - अनहुइ लिहुआ वुड कम्पोजिट कं, लिमिटेड
Q1: तपाइँको WPC उत्पादनहरु ग्राहकको लोगो संग हुन सक्छ?
A: हो, यदि ग्राहकले हामीलाई उनीहरूको लोगो दिनुहोस् भने हामी लोगोलाई उत्पादनहरूको प्याकेजमा राख्न वा विशेषका उत्पादनहरूमा छाप्न सक्छौं!
Q2: तपाई कहिलेसम्म नयाँ उत्पादनहरूको लागि नयाँ मोल्ड बनाउनुहुन्छ?
A: सामान्यतया, हामीलाई नयाँ मोल्ड बनाउन १-2-२१ दिनहरू आवश्यक पर्दछ, यदि केही भिन्नता भएमा minor-7 दिन बढि सानो परिमार्जन गर्नु पर्छ।
Q3: के ग्राहकले नयाँ मोल्डको लागि शुल्क तिर्नु पर्छ? कति छ? के हामी यो शुल्क फिर्ता गर्ने छौं? कहिले सम्म?
उत्तरः यदि ग्राहकले नयाँ मोल्ड बनाउनु पर्छ भने हो, उनीहरूले मोल्डको लागि शुल्क तिर्नु पर्छ, यो $ २00००- $ २00०० हुनेछ। जब ग्राहकले २० जीपी कंटेनरको लागि चार अर्डरहरू दिन्छन् हामी यो शुल्क फिर्ता गर्नेछौं।
Q4: तपाइँको WPC उत्पादनहरुको घटक के हो? ती के हुन्?
A: हाम्रो WPC उत्पादन घटक 30% HDPE + 60% वुड फाइबर + 10% रासायनिक Additives हुन्।
Q5: कति समय सम्म तपाईं आफ्नो उत्पादनहरू अपडेट गर्नुहुन्छ?
Q6: तपाइँको उत्पादन उपस्थिति को डिजाइन सिद्धांत के हो? फाइदा के हो?
Q7: साथीहरूको बीचमा तपाईंको उत्पादनहरूको भिन्नता के हो?
Q8: तपाईंको अनुसन्धान र कर्मीहरू को हुन्? योग्यता के हो?
Q9: तपाइँको उत्पादन अनुसन्धान र विचार के हो?
Q10: तपाइँका उत्पादनहरूका प्राविधिक विशेषताहरू के हुन्? यदि हो भने, विशिष्ट व्यक्तिहरू के हुन्?
प्रश्न ११: तपाईले कस्तो प्रकारको प्रमाणीकरण पार गर्नुभयो?
Q12: कस्तो प्रकारको प्रमाणीकरण तपाईं पारित गर्नुभयो?
Q13: कुन ग्राहकहरू तपाईंले कारखाना निरीक्षण पार गर्नुभयो?
Q14: तपाईंको खरीद प्रणाली कस्तो छ?
Q15: तपाईंको कम्पनीको आपूर्तिकर्ताको मानक के हो?
Q16: तपाईंको मोल्ड सामान्य रूपमा कहिले सम्म काम गर्दछ? दैनिक कसरी कायम गर्ने? मरेको प्रत्येक सेटको क्षमता के हो?
Q17: तपाईंको उत्पादन प्रक्रिया के हो?
Q18: तपाईंको उत्पादनहरूको सामान्य डेलिभरी समय कति हो?
Q १ Do: के तपाईसँग न्यूनतम अर्डर मात्रा छ? यदि हो भने, न्यूनतम अर्डर मात्रा कति हो?
Q20: तपाइँको कुल क्षमता के हो?
Q21: तपाईको कम्पनी कत्तिको ठुलो छ? वार्षिक उत्पादन मूल्य के हो?
Q22: तपाईंसँग के परीक्षण उपकरणहरू छन्?
प्रश्न २:: तपाईको गुणस्तर प्रक्रिया के हो?
Q24: तपाइँको उत्पादन उपज के हो? यो कसरी प्राप्त भयो?
Q25: WPC उत्पादनहरूको सेवा जीवनकाल कति लामो हुन्छ?
Q26: कुन भुक्तानी अवधि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ?
Q27: काठसंग तुलना गर्दा, WPC उत्पादनहरूको फाइदा के हुन्छ?
Q28: WPC उत्पादनहरूलाई चित्रकला चाहिन्छ? तपाइँ कुन रंग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
WPC सजावट भुइँ, डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, WPC आउटडोर डेकिंग, WPC फर्श, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग,